နေထိုင်မှုပုံစံ Archives - Page4of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အပျိုကြီးဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာလား? တစ်ဆိတ်ရှိ ဒီအပျိုကြီးတွေပဲ ထိခိုက်ခံနေရတာပါပဲ။တကယ်တော့ အပျိုကြီးဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာမဟုတ်သလို နှုတ်ခမ်းခြောက်လို့ အပျိုကြီးဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ရပါဘူး။ ဒါဆို ဘယ်သူတွေမှာ နှုတ်ခမ်းခြောက်လဲ? ကျား/မ၊ အပျို/အအို၊ ကလေး/လူကြီးမရွေး လူတိုင်းနှုတ်ခမ်း ခြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာတွေက နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ပိုဖြစ်စေသလဲ? ၁)ရေဓါတ်နည်းခြင်း။…
အကြောပြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ? အကြောပြတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲဆိုတာ မပြောခင် အကြောပြတ်ခြင်းဟာဘာလဲဆိုတာ အရင်ပြောပြပါ့မယ်။ အကြောပြတ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ? အကြောပြတ်တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်ကအကြောရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေပြားရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးမှ အရေပြားရဲ့တင်းအား(Elasticity)ကို ထောက်ပံပေးထားတဲ့ တစ်သျှူးလေးတွေ(collage and elastin)ရှိပါတယ်။၎င်းတို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ အရွယ်အစားကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့ ဆွဲဆန့်တဲ့ဒဏ်(tension)ကြောင့် ပြတ်ထွက်ပြီး ပြတ်ရာကြောင်းလေးတွေ…
“ မညီမညာ ပြသနာ “ အသားညိုသူတွေက ဖြူချင်ကြတယ်…..ဖြူသူတွေက ညိုချင်ကြတယ်….. အသားမညီသူတွေက အသားအရောင်လေးတပြေးတည်း ညီချင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အသားအရေ မညီညာခြင်းကလည်း ပြသနာတစ်ရပ်ပင်။ အသားဖြူဖြူ ညိုညို …..အနည်းဆုံးတော့ ခန္ဓာကိုယ်အသားအရောင်လေးညီနေရင် ဘာပြောပြောကြည့်လို့ အဆင်ပြေသည်။အသားမညီတဲ့အခါကျ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ …..ဝတ်ရစားရတာ…
ကလေးနှင့် ပျားရည် ပျားရည်ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာ၀ အစားအစာဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်သင့်တော်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ သဘာဝက ရတဲ့ အချိုဓာတ်အပြင် တခြား အာဟာရဓာတ်တွေပါ ပါဝင်နေတာကြောင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး သုံးစွဲကြပါတယ်။ ပျားရည်ကို ဒီတိုင်းစားကြတဲ့ အပြင်၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ရောသောက်တာ၊ မုန့်တွေလုပ်တဲ့…